Mandritra ny herinandro maoderin'ny lamaody, ny fomba fijerin'ny vehivavy lamaody an-tapitrisa manerana izao tontolo izao dia voafatotra amin'ny andian-dahatsary maromaro. Ireo mpanao gazety dia nandinika ny famoriam-bola, nanasongadina ny fivoaran'ny lamaody sy manan-danja indrindra, maminavina ny fironan'ny lamaody amin'ny vanim-potoana ho avy. Saingy matetika, ny fifantohan'ny mpanatrika lamaody dia tsy vitan'ny mpitsidika ny VIP sy ireo mpikomy amin'ny orinasa lamaody, fa ny ankizivavy sy ny tovolahy ihany koa izay mampiseho ny akanjo maoderina an-dalambe. Nahitam-pahombiazana ny akanjo, fihaonana mahazatra, saingy tena ilaina tokoa miaraka amin'ny lamaody mpaka sary eny an-dalambe - ary efa kintana ianao.
Ny làlana eny an-dàlambe dia mivoatra haingana, mitarika olona maro kokoa ao amin'ny voron-toeran'ny lamaody. Ireo manam-pahaizana momba ny lamaody dia manavaka na dia misy karazany samihafa aza isaky ny tanàna - paradisa Parisiana, New York haingana, fahantrana any Londona ... Ny endriky ny arabe ankehitriny dia mitaona ny lamaody amina lamaody, fa ny fanehoana ny tena fahafahana amin'ny lamaody. Amin'ity lahatsoratra ity, hiresaka momba ny vahaolana mazava sy tsy mahazatra isika amin'ny famoronana sary eo amin'ny làlana an-dalambe.
Ahoana no hijerena mamiratra eny an'arabe?
Misy vondrona roa lehibe izay ahafahanao manasaraka ny làlana eny an-dalambe. Ny voalohany dia ny endriky ny maro an'isa. Ny sary an'ity vondrona ity dia mijery tsara sy mendri-piderana, saingy tsy misongadina mihoatra ny fomban'ny mahazatra. Ity vondrona ity ihany koa dia ahitana sarin'ny zazakely-dolara , ary karazana rock na punk, toy izany koa dia mety ahitana ny akanjo amin'ny endrika fanatanjahan-tena sy ny swag . Na dia eo aza ny fahasamihafàna, dia marefo ny fomba rehetra ary matetika dia tsy mampanahy ny hafa.
Ny vondrona faharoa dia ny akanjon'ny mpankafy lamaody, lozam-boly lamaody. Eto ny sary mampihoron-koditra mampiasa biriky amin'ny metatra ambony, kiraro amin'ny sehatra 30 santimetatra misy stucco na lamba rongony. Ny akanjo toy izany dia manintona avy hatrany ny fiheveran'ny olona manodidina azy, fa ny fisehoan'io toetra io ivelan'ny fetra farany amin'ny fanonganam-bokony na ny herinandro lamaody dia miahiahy ny fahatsapany ara-tsaina.
Raha tsy mikasa ny ho tonga Moman'ny Monsters eo amin'ny sehatra eo an-toerana ianao, dia tsy soso-kevitra ny hikapoka fanandramana fakana an-kalamanjana. Ny mijery ny hatsaranao eny an-dalambe dia ny mitadidy fitsipika vitsivitsy:
Aza matahotra ny hanao fanandramana . Fomba ametrahana arabe ny fahalalahana. Raha tsy tianao ny fironana lamaody farany - esory izy ireo ary miakanjoa mba hahafinaritra anao ny fitaratra amin'ny fitaratra.
Loko mamirapiratra . Tsy azo atao ny mijery ny lalana eny an-dalambe raha tsy misy loko mazava. Na dia ny singa iray manontolo aza dia misy zavatra ao anaty maodelim-pihodinana, dia asio farafahakeliny loko maromaro - tranga iray hita maso, volon'akanjo marevaka, kiraro kiraro malefaka - izany rehetra izany dia hamongotra ny sary ary hahafinaritra kokoa. Ny singa niavaka dia raha totallook - sary natao tao anaty alokaloka (matetika mainty na mainty).
Loko mifangaro, loko sy style . Ny lohahevitra lehibe indrindra tamin'ity taona ity dia tena amin'ny lamaody an-dalam-be - mitafy kiraro baolina kiriodra miaraka amin'ny kodiarana matevina amidy, manamboatra akanjo plastika sy akanjo marevaka. Aza misalasala ary mahagaga.
Negligence . Ny sarinao dia tsy tokony hijery "malama". Avelao ny volom-bolo hitabatabana kely na hikolokolo kely kely kokoa noho ny habeny. Avelao ny sary misy sary manjelanjelatra ho an'ny famolavolàna kanto ao amin'ny hazavana, ary ny lalàm-pitiavana dia mankamin'ny fahamendrehana mora.
Non-standard . Angamba ny singa manan-danja indrindra amin'ny làlana an-dalambe. Ampiasao ny zava-mahazatra amin'ny anjara tsy mahazatra - manaova akanjom-baton-tsoavaly na apetaka fa tsy fampiakarana, ohatra, teôlôjia taloha. Mamoròna fanafody miaraka amin'ny fitaovana tanana, mifangaro styling sy printy, alao ny akanjo rehetra tianao indrindra. Andramo ny mijery ny lamaody amin'ny maso vaovao ary andramo zavatra izay tsy nisy olona nodiavina teo anoloanao.
Mazava ho azy, ho toy ny lozam-pifaneraserana an-dalambe, dia tsy ampy fahalalana betsaka momba ny lamaody, fa koa ny fahatokisana tsy azo lavina amin'ny tenanao. Fa mino ahy, ny fomba fijery mahatalanjona ny mpandalo ary ny fiheverana tsy mendrika ny maka fototeny dia mendrika izany. Tsy lazaina intsony ny fahatsapana fahafahana tanteraka, izay manome ny lamaody amin'ny lamaody any Fashionista.
Sary fararano amin'ny 2016 ho an'ny zazavavy
Fitiavam-bady fohy vehivavy 2013
Ny akanjon'ny akanjon'ny vehivavy
Rahoviana vao hamboly tongolo lay?
Hazo voninkazo dia mitsangana amin'ny voninkazo
Inona no atao amin'ny vakansy fahavaratra?
Famaritana ny foetus
Akanjo hoditra misy menaka
Hisy fihenan-tsofina heno ny hiran'ireo mpijery Eurovision-2016
Sakafo amin'ny sôkôla
Ny fanomezam-boninahitra voalohany amin'ny sipany
Feo ao anaty lafaoro
Halva amin'ny fampinonoana
Ny mpilalao sarimihetsika Daisy Ridley dia nanala ny kaontiny taorian'ny fanenjehana tao Instagram
Na eo aza izany vanim-potoana izany, i Chris Jenner dia matahotra ny bevohoka